Healthy & Beauty -
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆံပင်ဖြူခြင်း… အသက်ကြီးလို့ ဆံပင်ဖြူတာပုံမှန်ပါပဲ …အသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနဲ့ ဆံပင်အရောင်ကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောင်ခြယ်ဓာတ်တွေ နည်းလာတာကြောင့်ပါဒါဆိုရင် အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ခေါင်းမှာ ဆံပင်ဖြူတွေတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ၁။ မျိုးရိုးဗီဇ
ဝက်ခြံပေါက်နေချိန်မှာ ရှောင်ရမယ့်အစားအသောက် အရာ (၅)မျိုး
ဝက်ခြံပေါက်နေချိန်မှာ ရှောင်ရမယ့်အစားအသောက် အရာ (၅)မျိုးအခုလိုအချိန်အခါမှာ မီးကလည်းပျက်, ရာသီဥတုကလည်းပူ, ဝက်ခြံတွေကလည်းအများကြီးထွက်လာကော။ ဒီလိုဝက်ခြံတွေပေါက်လာရင် အစားအသောက်တွေကို ၃ ရက်လောက်ဆင်ခြင်ပေးရင် သိသိသာသာပျောက်လာလိမ့်ပါမယ်…__________________________________________________________________ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE
ပိတ်ရက်တုန်းက ကမ်းခြေသွားလို့ အသားညိုသွားပြီးလား? Suncream လိမ်းဖို့မေ့သွားလား? နွေရာသီက အရမ်းပူပြင်းလွန်းပြီး အိမ်မှာမနေနိုင်တော့ပဲအပန်းဖြေဖို့ ကမ်းခြေခရီးထွက်ရင်း အသားမဲသွားတယ်၊ အသားရေလောင်သွားတယ်ဆိုပြီး ခဏခဏညည်းညူးတဲ့ အသံတွေကြားရမှာပါ…ဒါတွေ ဖြစ်ရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ အိမ်မှာ